बेलायतमा तिज धमाका, एउटा स्टेज ५ राष्ट्रिय कलाकार (भिडियो फोटोफिचर सहित)
बर्मीड्घम, लण्डन । सोमबार बर्मिङहममा आयोजना भएको तीज विशेष कार्यक्रम बेलायतका अन्य ठाउंमा भइरहने कार्यक्रम भन्दा विल्कुलै भिन्न बन्यो । रेकर्डेड गीतहरु बजाएर डिजे डान्स गर्ने र नेपालबाट आएका कलाकारले प्रत्यक्ष गाएर नचाउने आम ट्रेण्ड भन्दा फरक मौलिक तीजका भाकाहरु समेत कार्यक्रममा घन्किए ।
लाली गुरांस फूल टिपेर लाउंछु केशमा….
चाडवाडमा नि घरमा एक्लै आंशु झर्दछ….
कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरु बाहेक व्यवस्थापन र सञ्चालनको पक्षबाट पनि शान्ति नेपाली समाज बेलायतका अन्य नेपाली संघसंस्थाहरुमाझ उदाहरणीय र फरक देख्न सकिन्थ्यो । कार्यक्रमका त्यति धेरै सहभागीहरुको लागि समेत संस्थाका सदस्य स्वयमसेवकहरुले कार्यक्रमस्थलमै आफै खाना पकाएर टेबल, टेबलमै सर्भ गरेका थिए । अरु कार्यक्रमहरुमा जस्तो धेरै भाषण पनि नरहेको कारण कार्यक्रम थप मनोरञ्जनात्मक बनेको थियो ।